Shuga: Linux uye yakavhurwa sosi yedzidzo | Linux Vakapindwa muropa
Shuga: Linux uye yakavhurwa sosi yedzidzo
Isu tataura kare muzvinyorwa zvakasiyana pane ino blog nezve kukosha kweLinux uye yakavhurika sosi software yekudzidzisa, kwete chete nekuti inoitendera kuti isvike kumakirasi akanyanya kutambura nekuchengetedza marezinesi uye nyika dzine hurombo, asiwo nekuda kwekuchinjika, huwandu hwemapurojekiti edzidzo aripo uye mabhenefiti ekodhi iri kuvhurwa kuitira kuti vadzidzi vadzidze naye.
When iwe unodzidza zvirongwaIni handizive nezvako, asi unogona kutanga nebhuku raunogona kudzidza chimwe chinhu. Pamwe unopinda mukirasi kana online kirasi kuti udzidze zvirongwa uye wotanga kuita bvunzo dzako dzekutanga, asi kuti iwe unonyatso kudzidza ndewekudzidzira nekuona iyo sosi kodhi yeimwe software yakanyorwa nevamwe vanogadzira Unogona kutanga nemapurogiramu akareruka uye nekugadzirisa kuti vaite chimwe chinhu chakasiyana ...
Chinhu chakareruka sekushandurwa chinoita kuti iwe udzidze zvinhu zvishoma nezvenyaya iyi zvakanaka. Asi zvisinei izvo uye nezvirongwa zvakaita seEdubuntu, LinuxKidX, Kano OS (uye Kano Kit) distros, openSUSE Li-FE, Ubermix, Edubuntu, Guadalinex Edu, DouDou Linux, nezvimwe, izvo zvatakatotaura nezvazvo nevamwe vazhinji. izvo zviripo izvo zvatisati tataura mune ino blog, nhasi tiri kuzotaura nezvazvo isingazivikanwe nevakawanda: Shuga (GUI). Iyo yakagadzirwa muPython nevatsigiri vakaita saChristopher Blizzard, Diana Fong, Walter Bender, nezvimwe.
Shuga chinongedzo cheLinux distro ine graphical interface yakagadzirirwa chirongwa Imwe Laptop Pamwana, kumakomputa evana vane zviwanikwa zvishoma pamakomputa eXO. Unogona kuzviedza nekuda kweshanduro Shuga padanda, uye iwe uchaona kuti zvakasiyana zvakanyanya neizvo iwe zvaunogona kufungidzira kana iwe waona vakwikwidzi vayo ... Iyo yakanakira nharaunda dzedzidzo, kuitira kuti vana vagone kudzidza kuwana mashandiro matsva eOS sezvavanoshandisa uye kubva kutanga zera (~ makore matatu).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Shuga: Linux uye yakavhurwa sosi yedzidzo
Iko kune kwakakurudzirwa webhu chinongedzo kuti uone nekudzidza nezve "Sugar (GUI)"?
Hechino chinongedzo kune shuga:
Ikoko iwe unogona kuverenga uye kurodha pasi chirongwa.
Maitiro ekunakidzwa neLinux kuburikidza nebhurawuza rako